ငှက်ပျောသီးက ၀ိတ်ကျစေတာလား? ၀ိတ်တက်စေတာလား? – Trend.com.mm
ဟိုလူက ငှက်ပျောသီးက ၀ိတ်တက်တယ်ပြောလိုက်၊ဒီလူကကျတော့ ငှက်ပျောသီးက ၀ိတ်ကျတယ်ပြောလိုက်နဲ့ ဝေခွဲမရဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ဒီတော့ ငှက်ပျောသီးက ၀ိတ်တက်စေတဲ့အသီးအနှံလား ၀ိတ်ကျစေတဲ့အသီးအနှံလား? ဆက်ပြီးဖတ်ကြည့်လိုက်ပါဦး
ငှက်ပျောသီးစားလို့ ၀ိတ်တက်တယ်၊၀ိတ်ကျတယ်ဖြစ်လာတာဟာ သင်ငှက်ပျောသီးဘယ်လောက်စားတယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မူတည်ပါတယ်တဲ့။
အစာမရှိတဲ့အချိန် ငှက်ပျောသီးပဲသီးသန့်စားရင် ၀ိတ်ကျစေပြီး ထမင်းစားပြီးအချိုတည်းမယ်။တစ်နေ့ကို ငှက်ပျောသီး လေးလုံးငါးလုံးစားမယ်ဆိုရင်တော့ဒါက သင့်ကိုဝိတ်တက်စေပါတယ်လို့လေ့လာတွေ့ရှိရပါတယ်။ငှက်ပျောသီးဟာ ဟော်မုန်းသုံးခုကိုညီမျှစေတယ်လို့သိရပြီး ခန္ဓာကိုယ်ကိုအပူငြိမ်းစေပါတယ်တဲ့။ငှက်ပျောသီးဟာ သေချာစားတတ်ရင် အ၀လွန်တာကိုကာကွယ်နိုင်ပြီး တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ ခန္ဓာကိုယ်ကြွက်သားတည်ဆောက်မှုကို ကူညီပေးပါတယ်။ပြီးတော့ သွေးအားနည်းရောဂါရှိတတ်သူတွေအတွက် သင့်တော်တဲ့အသီးအနှံတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။
ငှက်ပျောသီးတစ်လုံးမှာ ကယ်လိုရီ ၁၀၈ ပါဝင်ပြီး အဲ့ဒါဟာ ကာဗွန်ဟိုက်ဒရိတ် ၁၈ဂရမ်နဲ့ညီမျှပါတယ်။ကာဗွန်ဟိုက်ဒရိတ်ဆိုတာ ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတည်ဆောက်ဖွဲ့စည်းဖို့အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာဖြစ်သလို ပိုလျှံတဲ့အခါမှာတော့ ကိုယ်အလေးချိန်တက်စေတဲ့အရာပါ။သင့်ကိုဝိတ်ကျစေတဲ့ငှက်ပျောသီးတွေကတော့ ဗီတာမင် B6 နဲ့ အမျှင်ဓာတ်ကြွယ်ဝတဲ့ ငှက်ပျောသီးပုပုသေးသေးလေးတွေ၊အနီရောင်ငှက်ပျောသီး၊ဖီးကြမ်းငှက်ပျောသီး၊သီးမွှေး၊ငှက်ပျောသီးစိမ်းစတဲ့ငှက်ပျောသီးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။မနက်မိုးလင်း မနက်စာစားပြီးချိန် ငှက်ပျောသီးတစ်လုံးစားပေးတာက ကိုယ်အလေးချိန်ကိုသိသိသာသာလျှော့ချပေးနိုင်တယ်လို့လေ့လာတွေ့ရှိထားရပါတယ်။
ငှက်ပျောသီးမှာ ကယ်လိုရီများများပါဝင်သလို သဘာဝအချိုဓာတ်လည်းပါဝင်တာကြောင့် ၀ိတ်တက်ချင်သူတွေစားမယ်ဆိုရင် အစားစားပြီးချိန်အချိုတည်းတဲ့အနေနဲ့စားပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်တွေကတော့ တစ်နေ့ကို ငှက်ပျောသီး ၅လုံးထက်ပိုမစားဖို့အကြံပေးထားပါတယ်။ပိုစားမယ်ဆိုရင်ဝမ်းချုပ်တတ်တာ၊၀မ်းပုံမှန်မဟုတ်တာ စတဲ့အခြေအနေတွေကြုံတွေ့ရနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။
ဟိုလူက ငှကျပြောသီးက ၀ိတျတကျတယျပွောလိုကျ၊ဒီလူကကတြော့ ငှကျပြောသီးက ၀ိတျကတြယျပွောလိုကျနဲ့ ဝခှေဲမရဖွဈနတေတျပါတယျ။ဒီတော့ ငှကျပြောသီးက ၀ိတျတကျစတေဲ့အသီးအနှံလား ၀ိတျကစြတေဲ့အသီးအနှံလား? ဆကျပွီးဖတျကွညျ့လိုကျပါဦး
ငှကျပြောသီးစားလို့ ၀ိတျတကျတယျ၊၀ိတျကတြယျဖွဈလာတာဟာ သငျငှကျပြောသီးဘယျလောကျစားတယျဆိုတဲ့အပျေါမူတညျပါတယျတဲ့။
အစာမရှိတဲ့အခြိနျ ငှကျပြောသီးပဲသီးသနျ့စားရငျ ၀ိတျကစြပွေီး ထမငျးစားပွီးအခြိုတညျးမယျ။တဈနကေို့ ငှကျပြောသီး လေးလုံးငါးလုံးစားမယျဆိုရငျတော့ဒါက သငျ့ကိုဝိတျတကျစပေါတယျလို့လလေ့ာတှရှေိ့ရပါတယျ။ငှကျပြောသီးဟာ ဟျောမုနျးသုံးခုကိုညီမြှစတေယျလို့သိရပွီး ခန်ဓာကိုယျကိုအပူငွိမျးစပေါတယျတဲ့။ငှကျပြောသီးဟာ သခြောစားတတျရငျ အဝလှနျတာကိုကာကှယျနိုငျပွီး တဈခြိနျတညျးမှာပဲ ခန်ဓာကိုယျကွှကျသားတညျဆောကျမှုကို ကူညီပေးပါတယျ။ပွီးတော့ သှေးအားနညျးရောဂါရှိတတျသူတှအေတှကျ သငျ့တျောတဲ့အသီးအနှံတဈခုလညျးဖွဈတယျလို့သိရပါတယျ။
ငှကျပြောသီးတဈလုံးမှာ ကယျလိုရီ ၁၀၈ ပါဝငျပွီး အဲ့ဒါဟာ ကာဗှနျဟိုကျဒရိတျ ၁၈ဂရမျနဲ့ညီမြှပါတယျ။ကာဗှနျဟိုကျဒရိတျဆိုတာ ခန်ဓာကိုယျအစိတျအပိုငျးတညျဆောကျဖှဲ့စညျးဖို့အတှကျမရှိမဖွဈလိုအပျတဲ့အရာဖွဈသလို ပိုလြှံတဲ့အခါမှာတော့ ကိုယျအလေးခြိနျတကျစတေဲ့အရာပါ။သငျ့ကိုဝိတျကစြတေဲ့ငှကျပြောသီးတှကေတော့ ဗီတာမငျ B6 နဲ့ အမြှငျဓာတျကွှယျဝတဲ့ ငှကျပြောသီးပုပုသေးသေးလေးတှေ၊အနီရောငျငှကျပြောသီး၊ဖီးကွမျးငှကျပြောသီး၊သီးမှေး၊ငှကျပြောသီးစိမျးစတဲ့ငှကျပြောသီးတှပေဲဖွဈပါတယျ။မနကျမိုးလငျး မနကျစာစားပွီးခြိနျ ငှကျပြောသီးတဈလုံးစားပေးတာက ကိုယျအလေးခြိနျကိုသိသိသာသာလြှော့ခပြေးနိုငျတယျလို့လလေ့ာတှရှေိ့ထားရပါတယျ။
ငှကျပြောသီးမှာ ကယျလိုရီမြားမြားပါဝငျသလို သဘာဝအခြိုဓာတျလညျးပါဝငျတာကွောငျ့ ၀ိတျတကျခငျြသူတှစေားမယျဆိုရငျ အစားစားပွီးခြိနျအခြိုတညျးတဲ့အနနေဲ့စားပေးနိုငျပါတယျ။ဒါပမေဲ့ ကြှမျးကငျြသူပညာရှငျတှကေတော့ တဈနကေို့ ငှကျပြောသီး ၅လုံးထကျပိုမစားဖို့အကွံပေးထားပါတယျ။ပိုစားမယျဆိုရငျဝမျးခြုပျတတျတာ၊ဝမျးပုံမှနျမဟုတျတာ စတဲ့အခွအေနတှေကွေုံတှရေ့နိုငျတယျလို့သိရပါတယျ။